SADC : Manohana ny Fitondrana sy ny vahoaka malagasy -
AccueilRaharaham-pirenenaSADC : Manohana ny Fitondrana sy ny vahoaka malagasy
06/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manao fitsidihana roa andro eto Madagasikara ny delegasion’ny Sadc (Southern Africa of Development Community) tarihin’ny minisitry ny Fifandraisana amin’ny any ivelany avy amin’ny Repoblikan’i Angola sady filohan’ny Comité ministériel de l’organe de cooperation en matière de politique, de defense et de sécurité de la Sadc, Manuel Domingos Augusto.
Araka izany, noraisin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha ity delegasion’ny SADC ity niaraka tamin’ny masoivohon’Afrika Atsimo eto amintsika, Maud Dlomo, omaly. Tamin’izany indrindra no nisian’ny dinidinika teo amin’ny roa tonta mahakasika ny fanomanan’i Madagasikara ny fifidianana.
Fa ankoatra izay, dia nanambara ny avy amin’ny Sadc fa manohana ary eo akaikin’ny vahoaka malagasy hatrany izy ireo. Voalaza fa manohana ny andrim-panjakana demokratika sy ny governemanta malagasy ihany koa izy ireo.
Raha ny fanazavana, dia antony goavana amin’ny fitsidihan’izy ireo ny fijerena ifotony ny raharaham-pirenena miaraka amin’ny olom-panjakana sy ireo antoko politika, amin’ny fanomezana lanjany ny lalàm-pifidianana lany teny amin’ny Antenimieram-pirenena. Eo ihany koa ny fanaovana tombana amin’ny fikarakarana ny fifidianana ho avy, sns.
Ankoatra izay, dia noraisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka, teny amin’ny birao fiasany teny Anosy ihany koa ireto delegasion’ny Sadc ireto. Notsindrian’ny minisitra tamin’izany fa ilain’ny firenena sy ny vondrona rezionaly ny fitoniana. “Nampihitsoka ny fampandrosoana teto amin’ny firenena ny fisian’ireny krizy niverimberina ireny. Tsara ny manamarika fa manampy sy manohana ny Ceni amin’ny fikarakarana ny fifidianana ihany koa ny Sadc. Tafiditra amin’izany ny fakan-kevitra rehetra nanomboka ny taona 2013, izay nahazo fankatoavana demokratika. Eo anivon’ny Sadc, manan-danja ary laharam-pahamehana ny fametrahana fitoniana…”, hoy ny minisitra Henry Rabary-Njaka.
Tetsy andaniny, nanao fitsidihana ara-pahalalam-pomba ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ihany koa ireto delegasiona vahiny ireto ny andron’ny omaly ihany.
Am-pelatanan’ny dinika ho an’ny fanavotam-pirenena na ny DFP , ny porofo rehetra ahafahana mitory ireo mpiasam-panjakana manatrika fampielezan-kevitra, na manohana kandidà. Maro ireo tranga niseho indrindra tany amin’ny faritra hoy Maharavo Tolojanahary na i Doudou, ...Tohiny